Kachin Duwa: အာဏာဖီဆန် တော်လှန်ရေး ဆုိုတာ
အာဏာဖီဆန်တော်လှန်ရေး ဆုိုတာ ဂန္ဒီ လုပ်ခဲ့တာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုပေးပါတယ်။ ဥပဒေ ကုိုက မှားနေလုို့ တော်လှန်ပါတယ် ဆုိုမှပဲ တည်ဆဲ ဥပဒေ နဲ့ အရေးယူမယ် ဆုိုတာကုို ကြောက်နေရင် ဖက်ဒရယ် နဲ့ တော့ ဝေးနေရအုံးမှာပါ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် အာဏာဖီဆန် တော်လှန်ရေး ဆုိုတာ တည်ဆဲ ဥပဒေ အရ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစုိုးရ ယန္တရား တခုလုံး ရပ်တံ့သွားအောင် တော်လှန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သန်းခေါင် စာရင်းကိစ္စမှာ စာရင်းပုံစံ မှားနေလုို့ ပြင်ပေးပါ… ဆုိုတာလဲ နားမထောင်.. ဗမာအစုိုးရ က လုပ်ချင်တာလုပ်… မသိနားမလည်တဲ့ အလှူ့ရှင် နုိုင်ငံတွေက သူတုို့ အလုပ်ဖြစ်ဖုို့လောက်သာ ကြည့်တယ် ဆုိုရင်… သန်းခေါင်စာရင်းမထည့်ဘူး လုို့ ကိုယ့်ဟာကုိုယ် ငြင်းဆန်နုိုင်ပါတယ်။
ငြင်းဆန်တာလောက်နဲ့ ထောင်ထဲ ပုို့မယ် ဆုိုရင် တမျိုးလုံး ဆုိုရင်ကော…. ဘယ်ထောင်မှာ ပုို့ထားမှာလဲ….
Posted by Du Wa at 4:49 PM